वुहान एयरपोर्ट आइपुगे नेपाली- समाचार - कान्तिपुर समाचार
वुहान एयरपोर्ट आइपुगे नेपाली
कोरोना भाइरसको उद्‍गमस्थल चीनको हुबेई प्रान्तको वुहान र आसपासमा रहेका नेपालीको उद्धार प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पुगेको छ। अहिले उनीहरु वुहान एयरपोर्ट आइपुगेको बेइजिङस्थित नेपाल दूतावास स्रोतले जनाएको छ । शनिबार बिहान हुबेईका विभिन्न शहरमा रहेका १८२ नेपालीहरुलाई वुहान एयरपोर्ट जम्मा हुन भनिएको थियाे ।
चीनको हुबेई प्रान्तको वुहान र आसपासका शहरमा रहेका नेपाली नागरिकको उद्धारका लागि शनिबार दिउँसाे नेपाल एयरलाइन्सको चार्टड विमान काठमाडौंबाट उडेको छ ।
शनिबार दिउँसो पौने तीन बजे त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट उडेको विमान राति ९ बजे चिनियाँ समयमा वुहान तियाङहे अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा अवतरण गर्नेछ ।
वुहानबाट स्थानीय समय अनुसार रातको ११ बजे नेपाली नागरिकलाई लिएर नेपाल एयरलाइन्सको विमान काठमाडौं फर्कनेछ । आइतबार बिहान सवा २ बजे विमान काठमाडौंमा अवतरण गर्ने तालिका रहेको छ।
काठमाडौं आइसकेपछि चीनबाट फर्किएका १८२ जनालाई कम्तीमा १४ दिन भक्तपुरको खरिपाटीमा अवस्थित नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको तालिम केन्द्रमा राखिनेछ ।
विमानका ककपिट 'क्रू’ लाई कम्तीमा एक हप्ता आइसोलेसनमा राखिनेछ भने बाँकी क्याबिन 'क्रू' लाई भने १४ दिन नै क्वारेन्टाइनमा राखिनेछ ।
नेपाल एयरलाइन्सको अपरेसन डिपार्टमेन्टका क्याप्टेन दीपु ज्वारचनका अनुसार चीन जाने विमानमा एक विदेशी र एक नेपाली गरी दुई जना पाइलट, ६ जना क्याबिन क्रू, १ जना इन्जिनियर, १ जना फ्लाइट डिस्प्याचर, १ जना लोड मास्टर र ४ जना नेपाली सेनाका चिकित्सक रहनेछन् ।
प्रकाशित : फाल्गुन ३, २०७६ १५:५९
'चीनबाट फर्काइनेलाई अन्यत्र राख्दा विवाद होला भनेर मेरै जिल्लामा राख्‍न लागेको हो'
काठमाडौँ — चीनका कोरोना भाइरस प्रकोप फैलिएका क्षेत्रमा रहेका नेपालीलाई नेपाल ल्याउन लागिएको छ । चीनबाट नेपाल ल्याउन लागिएका १८२ नेपालीलाई आइतबार बिहान २ बजेपछि नेपाल आइपुग्ने बताइएको छ । उनीहरूलाई भक्तपुरको खरिपाटीमा राख्ने तयारी भइरहेको छ ।
चीनबाट फर्काइन लागेका नेपाली नागरिकलाई भक्तपुरको खरिपाटीमा राख्नेबारे त्यहाँबाट निर्वाचित नेमकिपाका सांसद प्रेम सुवालले विरोध गर्दै आएका छन् । उनले यसअघि पनि संसदमा खरिपाटीमा चीनबाट फर्काइन लागेका नेपालीलाई राख्न नहुने बताए । चीनबाट फर्काइन लागेकालाई भक्तपुरमा राख्दा जोखिम निम्त्याउने उनको तर्क छ ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले शनिबार प्रतिनिधिसभामा सरकारका दुई वर्षका उपलब्धिका फेहरिस्त राखेपछि सांसद सुवालले प्रश्न सोधे, 'जनता भन्दैछन्, भक्तपुरमा कोरोना भाइरसको क्वारेन्टाइनस्थल राख्नु र नगरकोटका सडक नबनाउनु नगरकोटको पर्यटनलाई समाप्त पार्नु हो । स्थानीय जनतालाई भगाउनु हो ।'
भक्तपुरबाट निर्वाचित नेमकिपाका एकमात्र सांसदको प्रश्नको जवाफमा ओलीले भने, 'भक्तपुर मेरो पनि जिल्ला हो, म त्यही बस्छु ।'
चीनबाट कोरोना भाइरसका बिरामी ल्याउन लागिएको होइन भनेर पनि ओलीले सुवाललाई सम्झाए । 'कोरोना भाइरसका बिमारी नेपालले ल्याउन लागेको होइन । कुनै देशमा बिरामी भयो भने त्यो निको नभई ल्याउन पाइँदैन । हामीले त्यो बिमारले नछोएका विद्यार्थीहरूलाई ल्याउन लागेका हौं, जाँच गरेर ल्याउन लागिएको हो,' उनले थपे, 'बिमार छैन उनीहरूमा, तैपनी कथम कदाचित बाटोमा पनि संक्रमित भयो कि भनेर क्‍वारेन्टाइनमा राख्नुपर्छ ।'
नेपाल फर्काइन लागेकालाई कहिँ न कहिँ त राख्नुपर्ने भन्ने ओलीको भनाइ थियो । उनले भने, 'नेपालमा ७७ जिल्ला छन्, कहिँ त राख्नुपर्ला ! अनि डाक्टर पनि नभएको, अस्पताल पनि नभएको ठाउँमा लगेर राख्न त भएन । अलिकति अनुकूलता, सुविधा भएका ठाउँमा राख्नुपर्‍यो ।'
सुवालले भक्तपुरमा राख्नै नहुने भन्ने तर्कको जवाफलाई इंगित गर्दै ओलीले भने, 'मेरो जिल्लामा राख्न हुन्न भनेपछि कुन जिल्लामा राख्‍ने ? भक्तपुर मेरो पनि जिल्ला हो, म पनि त्यही बस्छु । त्यसकारण मैले अरु जिल्लामा पठाउँदा विवाद होला भनेर मेरै जिल्लामा राख्‍न लागेको हो ।'
'भूभाग नै फिर्ता ल्याउने तयारीमा छौं भने नक्सा छाप्‍ने कुरा के हो र ?'
प्रतिनिधि सभामा प्रधानमन्त्री ओलीको सम्बोधनको पूर्णपाठ
एमसीसी परियोजनाले नेपाली अर्थतन्त्रको तस्बिर बदल्ने निश्‍चित : प्रधानमन्त्री
सभामुखले प्रस्तुत गर्नेबित्तिक्कै एमसीसी पास हुन्छ : प्रधानमन्त्री
प्रकाशित : फाल्गुन ३, २०७६ १५:५२